BADHAADHAA DHAQQABAA WAARIYOO’-Ogeessa Seeraa fi barsiisaa « QEERROO
March 25, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Maqaansaa Badhaadhaa Dhaqqabaa Waariyoo jedhama. Biyya Oromiyaa godina Arsii Lixaa Shaashamannee Ganda Kuyaaraa jedhamtuuttii dhalatee guddate. Dargaggoo ogummaa lama gonfatedha; Ogummaa herregaa/Mathematics fi Seeraa/Law ti. Barumsa Herregaa barsiisuun dhaloota qubee nama qaraa turedha. Manneen barnootaa naannoo Finfinnee marsanii jiran hedduu barsiiseera. Erga barnoota seeraa Yunivarsiitii Finfinnee seenuun abratee boodammoo ogummaa seeraa gadi fageenyaan leenji’eera. Abbaa murtii Godina Baalee ta’eemagaalaa Roobee keessa hojjetaa tureera.
Sadaasa 3 bara 2015 gara Awuropaa biyyaa switzerland magaala Geneva lenjiif dhufee sirnnicha nama nyaataa sana baqatee as cehee jira. Yeroo ammaa kana biyyuma Switzerland hirkattummaa siyasaan gaafatee jira. Akksumasii carraa barnnoota (Scholarship ) biyya Awurooppaa argatee barnootasaa Masters of International commercial law and dispute resolution jedhuun bara kana xumurataa jira. Wolumaagalatti Abbaa murtii nannoo Oromiyaa duraan fi Barataa LLM International commercial law and dispute resolution dhaan qaroo waaqni dhangi’edha jechuun nidanda’ama.
Muuxannoowwn keessa darbe hundaa…haala jiruu biyya keessaa…waan OPDO n itti jirtuufi iccita golasheeti hundarratti mariyanneerra. Waa’ee Oromoo diyaaspooraas gadi fageenyaan ilaalleerra. Walgahiiwwan biyya alaa kana keessa adeemanirrattis iccitaafi duubeesaa mara ija ogummaan ilaalleerra.
Abbootiimurtii Oromiyaafi federaalaa maal gochuu akka qaban ibsa kenneera. Icciti aangoosaaniis maal akka ta’e addeessee jira. Qeerroofi Qarreen biyya keessaa maalitti akka jiraniifi maal gochuu akka qabanillee xiinxalameera. Dinagdeen Oromiyaa eessa akka jirus soqneerra. Dinagdeemoo Bilisummaa kan jedhus gadi fageenyaan ilaalleerra.
« Amnestii Internaashinaal Waa’ee Mirga Dhala-namaa Oromoo Irratti Kolombiyaa Yunivarsitii Keessatti Kora Qopheesse
SBO: Bitootessa 26 bara 2017. Oduu, Qophii Waa’ee Olola Wayyaanee Irratti Fuulleffatee fi Gaaffii fi deebii Artiist Tafarii Mokonnin Waliin Taasifame -Kutaa 2ffaa. »